Diblomaasiyadda ayaa ah xalka xiisadda Ruushka iyo Ukraine
Ruushka ayaa abuurtay qalalaase caalami ah iyada oo 100,000 oo askari ku ururiyay xudduudaha Ukraine. "Ruushka waa kan diyaariyey kharribaad gudaha ah, xasillooni darro, iyo been abuurka ujeeddooyinkeeda Ukraine," ayay ku dhawaaqday Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Arrimaha Siyaasadda Victoria Nuland shir jaraa'id oo ay dhowaan qabatay.
"Waana Ruushka kan faafiyay warar been abuur ah oo ku saabsan Ukraine, Maraykanka, iyo NATO si ay u caddeeyaan falalkeeda." Mareykanka ayaa daandaansigaas kaga jawaabay wadahadalo dublamaasiyadeed oo xiriir ah. "Dibloomaasiyadda," ayay tiri Xoghaye Nuland, "waa doorashada ugu fiican ee lagu soo celin karo xasilloonida iyo ammaanka Ukraine, Yurub, iyo Ruushka laftiisa."
Wadahadalka Xasiloonida Istaraatiijiga ah ee lala yeeshay Ruushka, Maraykanku wuxuu muujiyay sida ay uga go'an tahay dibloomaasiyadda iyadoo la saarayo fikrado horudhac ah miiska, oo ay ku jiraan marka la eego hufnaanta militariga, tallaabooyinka yaraynta khatarta, iyo jimicsiga, ayuu yiri Xoghaye Nuland.
"Waxaan sidoo kale caddaynay in horumarka dhabta ah uu ku dhici karo oo kaliya jawiga kacsanaanta, ma aha mid sii xumaanaya, oo ku saleysan is-dhaafsiga dhabta ah. Taasi waxay u baahan tahay Ruushku inuu miiska joogo oo uu qaado tillaabooyin la taaban karo si loo yareeyo xiisadaha " ayay tiri Nuland.
"Ruushka hadda waxa uu leeyahay doorasho adag oo uu ku sameeyo: in uu qaado dariiqa diblomaasiyadda iyo wadahadalka ama uu raadiyo iska-hor-imaad iyo cawaaqibka weyn ee taasi keeni doonto," ayuu raacisay Xoghaye Nuland.
"Haddii dawladda Ruushku ay sii weerarto Ukraine, ay sii kordhiso xasilloonida Ukraine, waxaan diyaar u nahay oo la safan nahay xulafadayada iyo la-hawlgalayaashayada si aan u soo rogno kharashyo daran. Waxaan kaga jawaabi doonaa tillaabooyin dhaqaale oo baaxad leh, oo ay ku jiraan kuwa aan horay loo isticmaalin, waxaana kharash aad u badan ku keeni doona dhaqaalaha Ruushka iyo nidaamkiisa maaliyadeed.
"Laakin aan mar kale carabka ku adkeeyo dookheyga waa dublamaasiyad," ayuu yiri ku xigeenka xoghayaha Nuland. Habkani waxa uu keenay natiijooyin hore. "Waxaan ka wada xaajoonnay qalabyo badan oo ka sameysan gogosha nabadda iyo amniga, oo ay ku jiraan heshisyadii Helsinki, heshiiska INF, iyo heshiisyada kale ee xakameynta hubka."
Diblomaasiyadda oo la tashi buuxa iyo wada shaqayn buuxda la yeelanaysa xulafadayada iyo dal kasta oo danihiisa ay saamaysay ayaa ah dariiqii hore loogu socon lahaa ayuu yidhi Xoghaye Nuland. "Tani waa waxa hadda u baahan inay dhacaan."